I-UIP1000hdT - I-Homogenizer enamandla futhi ehlukahlukene
I-UIP1000hdT (1000W, 20kHz) iyisetshenziswa esinamandla futhi esikwazi ukuvumelanisa ne-ultrasonic yokuhlolwa kwelebhu nokucubungula kwezimboni zamanzi. It isetshenziselwa izinhlelo zokusebenza, ezifana emulsification, Ukuhlakazeka & i-particle kahle, lysis & Ukukhipha, ukuqedwa noma Ukusabela kwe-Sonochemical. Umbukiso wokuthinta umbala, ukulawula okukude kwesiphequluli, ukurekhoda kwedatha okuzenzekelayo, iKhadi le-SD edidiyelwe kanye nokushisa kwe-plugable kanye nezinzwa zokucindezela kuvumela ukulawula inqubo ecacile nokuthuthukiswa komsebenzi.
I-UIP1000hdT iyisixhumanisi esinamandla phakathi kokuhlolwa kwe-laboratory kanye nokucubungula kwezimboni zamanzi. Ihlanganisa ukuguquguquka nokuphathwa okulula okudingekayo ekucwaningweni nasekuthuthukisweni ngokusebenza okuvelele ekusebenzeni okukhulu. Ngenxa yalesi sizathu, le divayisi eyodwa isetshenziselwa ukuhlola ukulinganisa ukulinganisa ububanzi, ukucubungula inqubo, nokucubungula izinqubo ze-ultrasonic liquid.
Uhlelo olungaguquguquki lokugcwalisa R&D Izidingo
Njengoba i-UIP1000hdT iguquguquka kakhulu futhi ivumelanisa nezimo, isetshenziselwa eziningi R&D izikhungo kanye amanyuvesi, namuhla. Ukuguquguquka kwemiphumela ye-UIP1000hdT kusuka kuhlu olubanzi lwezesekeli eziningi, ezifana ne-sonotrodes, ama-boosters kanye namaseli okugeleza. Ngokuhambisana ne-sonotrode kanye ne-stand, ungakwazi ukunikezela isampula beakers (chofoza ukuze ukhulise isithombe) ukuhlola ama-formulations ahlukahlukene ayenziwe ngempendulo yawo ku-sonication. Ukuze kusetshenziswe ama-batches amakhulu kunama-amalitha angu-5, ngokuvamile siyancoma ukuthi sisebenzise ngokusebenzisa isisombululo se-cell flow (imodi yokugeleza) ukuze uthole ikhwalithi yokucubungula kangcono. Uma isetshenziswe nge-cell cell (isithombe sokunene) ungasebenzisa amasampula amakhulu ngokuphindaphindiwe ukuze uhlele ukulungiswa phakathi kwamapharamitha, njengokulinganisa, ukucindezela nokubunjwa kwamanzi, kanye nemiphumela yokusebenza kanye nokusebenza kahle. Uma isetshenziselwa ukunikezwa kwezidakamizwa kumodi yokugeleza, i-UIP1000hdT ingajwayelekile phakathi kuka-0.5 no-4.0L / min (Izinga langempela lizoxhomekeka enkambisweni yakho). Njengoba i-UIP1000hdT ikhona ibanga eligcwele lezimboni, ingaqhutshwa Amahora angu-24 ngosuku (24h / 7d). I-UIP1000hdT ingahle isebenze cishe. 1 kuya ku-5m3 ngosuku. Ukuze uthole ukukhiqizwa okuphakeme okukhiqizayo, sincoma ukuthi sisebenzise ama-unit amaningi noma enye yamadivayisi amakhulu ama-ultrasonic:
I-UIP2000hdT (2000W, 20kHz)
I-UIP4000hdT (4000W, 20kHz)
I-UIP10000 (10000W, 20kHz)
Sonication enamandla iyisisombululo senqubo yezicelo eziningi zokufakelwa kwamanzi, njengokuthi Emulsifying, Ukuhlakazeka, Ukukhokha noma ukuqedwa. I-UIP1000hdT inikeza amagagasi amakhulu e-ultrasound ukufeza imisebenzi edingayo ngaphandle kwezinkinga. Ukuqinisekisa ukuvumelana inqubo yekhwalithi, hhayi kuphela amandla okuthunyelwa kubalulekile, i ukulawula nokuqapha zonke izinqubo ezibalulekile zenqubo iyisihluthulelo. Isizukulwane esisha se-hdT ultrasonicators senza opharetha ukuba aqhube umshini we-ultrasonic nge-touch display noma isiphequluli esikude sokulawula. Yonke imigomo yenqubo efanele – ezifana amplitude, isikhathi sonication, izinga lokushisa kanye nokucindezela – ziqoshwa ngokuzenzakalelayo futhi zilondolozwe njengefayela le-CSV kwi-SD ehlanganisiwe.
Ngaleyo ndlela, i-UIP1000hdT entsha inikeza amandla afanayo e-ultrasound njengowandulela u-UIP1000hd, kodwa ihamba phambili ngobubanzi obuningi bezinye izici ezengeziwe, okwenza inqubo ye-ultrasound ibe yindlela engcono kakhulu yomsebenzisi. Kusukela ekubukweni kokusebenza, ukulawulwa okuqondile kwazo zonke izinqubo zemishini ye-ultrasonic yimisebenzi esemqoka ephelele.
1000 watts ultrasonicator enamandla
umbukiso wokuthinta umbala ogcwele
ukurekhoda kwedatha yemigomo yezinqubo
ihlanganiswe ikhadi le-SD
inzwa yomsindo (okukhethwa kukho okutholakalayo)
Isikrini sokuthinta ezinemibala yisithuthukisi esikhulu okwenza le divayisi ibe yinto engcono kakhulu yomsebenzisi. Isikrini sokuthinta-nethinethi evumela ukuphathwa okulula nokuqinisekisa ukulungiswa okuqondile kwemingcele yokusebenza kanye nokuboniswa kokusethwa kwamandla we-ultrasound. Imenyu yokulawula idijithali inembile ukusebenzisa futhi ihlanganisa imenyu yezilungiselelo ezihleliwe ngokucacile. Isimo se-amplitude / amandla kanye nemodi ye-pulse ingashintshwa yi-slider touch-slider (ene-1%, 5% noma i-10% ye-snap). Umsebenzisi uthatha isinqumo, uma ekhetha ukuboniswa kwe-amplitude namandla njengama-bargraphs ezinemibala noma ukumelwa kwamanani. Ukuboniswa kungashintshwa kusuka kwimodi yokubuka evamile ibe yimodi ye-NUMBER yeBIG, lapho ukungafani okuphezulu nokukhulula kwefonti kunciphisa ukufundwa kwayo.
Ngenxa yesikhombimsebenzisi sayo sewebhu se-LAN, i-UIP1000hdT ingalawulwa ngokusebenzisa noma yisiphi isiphequluli esivamile, njenge-Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla, i-mobile IE / Safari. Ukuxhumeka kwe-LAN iyi-ipulaki elula ye-plug-n-play engafuni ukufakwa kwesofthiwe. Idivayisi ye-ultrasonic isebenza njenge-DHCP iseva / iklayenti kanye nezicelo noma ibeka i-IP ngokuzenzakalelayo. Idivayisi ingaqhutshwa ngokuqondile kwi-PC / MAC noma isebenzise inkinobho noma router. Ukusebenzisa i-router engenayo i-wireless ngaphambili, idivayisi ingalawulwa kusuka kuma-Smartphones amaningi noma kumakhompyutha we-tablet, isib. I-Apple iPad. Ukusebenzisa ukuthunyelwa kwe-port ye-router exhunyiwe, ungalawula i-UIP1000hdT yakho nge-intanethi kusuka noma ikuphi emhlabeni – usebenzisa i-smart-phone yakho noma ithebhulethi njenge-remote remote control.
I-UIP1000hdT ingaqhutshwa futhi ilawulwe nge-LAN (inethiwekhi yendawo yendawo, bheka ibhokisi elungile) elenza kube lula ukusebenza futhi ivumela ukucubungula okuphezulu ukuguquguquka. Yonke imininingwane yenqubo ye-sonication ibhalwe ekhadini leDatha le-SD, ngokuzenzakalelayo. Inzwa ehlulwayo ibeka izinga lokushisa unomphela. Inzwa yomshoshaphansi etholakalayo ngokwanele ingafakwa ngokungeziwe ukuze irekhodile ingcindezi.
Wonke amadivaysi e-ultrasonic e-Hielscher anemishini ehlakaniphile yokuvamisa imishini. Uma idivayisi ishintshiwe, i-generator izobona imvamisa yokusebenza efanele futhi iqinisekise ukuthi idivayisi isebenza kule mvamisa. Ukulungiswa kwemvamisa okuzenzakalelayo kuthuthukisa ukusebenza kahle kwamandla kagesi nokwethenjwa kwamadivaysi ethu e-ultrasonic.
I-UIP1000hd yenzelwe futhi eyakhelwe ukukhiqizwa kwezohwebo. Ifakazela umklamo wayo oqinile, ohlala njalo ezingaphezu kwezinkulungwane zokufakelwa kwezentengiselwano emhlabeni jikelele lapho isetshenziselwa ukukhiqizwa kwansuku zonke. Le prosesa ye-ultrasonic idinga isondlo esincane, kulula ukusetha futhi kulula ukuhlanza nokuhlanza. Izigameko ezikhethekile ze-flow cell (cell-reactors) zihlangana ne-CIP ethuthukile (ihlanzekile-indawo) kanye nezidingo ze-SIP (inzalo-in-place) nazo ziyatholakala. I-transducer ye-UIP1000hdT ikhona Ibanga le-IP65, ukuze ikwazi ukufakwa ezindaweni ezidinga (ukungcola, uthuli, umswakama, ukusebenza ngaphandle nokunye), kanti i-generator ingafakwa kude kude kwenye indawo.
Njengoba amadivaysi e-ultrasonic ase-Hielscher analo kakhulu ukusebenza kahle lapho ukuguqulwa kwamandla kagesi kube ukucutshungulwa kwemishini ye-sonotrode, i-transducer yethu ingenziwa ekwakhiweni okuvaliwe. Awekho i-louvers esecaleni le-transducer. Njengoba ukulahleka kwamandla, okungabangela ukushisa emzimbeni we-transducer evaliwe kakhulu, akukho ukupholisa okuphoqelelwe, okufana nomoya ocindezelweyo noma amanzi adingekayo. Okubaluleke nakakhulu lokhu kusho, lokho amandla engeziwe idluliselwa emanzini, okuholela ku-a sonication kangcono. Ukusebenza kahle kwamandla we-UIP1000hdT kufinyelele. 80-90% kusuka ku-plug yamandla ku-liquid (chofoza esithombeni ngenhla ukuze ukwandise ishadi).
I-UIP1000hdT ingaba run at 1000W ngokuqhubekayo. Amandla adluliselwa ku-amplitude elawulwayo, ukuze ukuphakama kwezimboni ze-ultrasonic ku-sonotrode kuhlale ngaphansi kwezimo zomthwalo. Ungashintsha ukuphakama okuvela ku-20 ukuya ku-100% ku-generator nangokusebenzisa izimpondo ezihlukahlukene ze-booster. I-amplitude ekhethiwe ibanjwe njalo, ngenkathi iveza noma iyiphi into kunoma yikuphi ukucindezela. Lesi sici sikunikeza ukulawula okugcwele phezu kwepharamitha ye-sonication ebaluleke kakhulu: Ukulinganisa.
I-Industrial Ultrasonic Processor UIP1000hdT
Ama-watts angu-1000 ehlanganisa i-transducer ye-ultrasonic ne-generator, imvamisa ye-ultrasonic engu-20kHz, uhlelo lwe-frequency yokugudluza imvamisa, i-amplitude engu-25 micron, i-amplitude eguquguqukayo kusuka ku-20 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, i-transducer ibanga le-IP64, ukulawulwa kwe-digital, ne-touch-screen screen (Izinsuku ezingu-0.1 kuya kwezinsuku ezingu-99), ukuvalwa lapho ukufakelwa kwamandla okugcina kufinyelela: Ws, Wh, kWh; ukulinganisa okuzenzakalelayo uma kunesidingo: ukuzimisela kwamandla angenalutho okuthembekile ekukhusheni amandla okuvula amandla, ukurekhoda kwedatha: ukuphakama kwedatha, amandla, isikhathi, izinga lokushisa kwi-SD Card yangaphakathi (1GB), ukubonisa nokulawula okude nge-browser noma i-PC noma iMAC ngaphandle kokufakwa kwesofthiwe , nge-sensor yokushisa, izinga lokushisa: ° C, ° F (-50 ° C bis 200 ° C), ukuqapha izinga lokushisa: ukushintshashintsha okuguquguqukayo / amaphuzu (-50 ° C - 200 ° C), i-transmitter ye-3m i-generator , nge amathuluzi okhulayo, titanium uphondo ngentambo female M14x1
i-reactor ye-stainless steel ehlulekayo, max. i-bar 10 yokucindezela, ye-UIP500hdT eya ku-UIP2000hdT kuhlanganiswe ne-sonotrode flange nokuma kwe-ST2, i-NBR izindandatho, izixhumi ze-tube (1/2 intshi) ne-clip
i-reactor ensimbi engenasici ngejacket yokupholisa, max. i-bar 10 yokucindezela, ye-UIP500hdT eya ku-UIP2000hdT kuhlanganiswe ne-sonotrode flange nokuma kwe-ST2, i-NBR izindandatho, izingxube zebhubhu (intshi engamamitha angu-1/2, epholile 1/4 intshi) ngesiqeshana
I-Sonication System ye-7 x UIP1000hdT
Izilungiselelo Ezihlukahlukene Zesistimu
I-UIP1000hdT nge-flow cell kanye nepompo
I-UIP1000hdT isethiwe – Inani Elihle Ngenani Elihle
Isethi ye-UIP1000hdT ihlanganisa zonke izinto ezidingekayo kakhulu ekucwaningweni nasekuhlolweni kwezinqubo zamanzi zamanzi. Ihlanganisa insimbi enamandla, i-watts yedijithali yedijithali ye-ultrasonic engu-1 000 i-UIP1000hdT ene-stainless steel stainless flow flow cell, i-sonotrodes amabili, i-booster kanye nenzwa yokushisa ukuze ukwazi ukushintsha zonke izilinganiso ezibalulekile ezinkampanini ze-ultrasonic liquid.
Lokhu kusethwe yi isethaphu esifanelekayo se-R&D, umshayeli we-pilot kanye nokukhiqizwa okuncane izinga nganoma yiluphi uhlobo lwe-ultrasonic liquid processing.
I-UIP1000hdT kakhulu Lula ukusebenza ukuze ube neyunithi yakho uphinde ugijime kungakapheli imizuzu. Isici saso sokulawula ukuphakama sigcina ukuphakama okuqhubekayo ngaphansi kwazo zonke izimo zomthwalo. Lokhu kukunika izimo zokusebenza zokukhiqiza kabusha. Ungashintsha ubukhulu bamakhompiyutha nangekhamera, ukuze ukwazi ukucubungula uketshezi lwakho kuma amplitudes ahlukahlukene. Uma kudingekile, ingaqhutshwa ngomhlaka 24/7.
Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukucindezela insimbi engagqwali insimbi yokuphendula ukucindezela kuze kube ngu-10: 00.
Leli yunithi ingahlanganiswa kalula ku-liquid flow circulations. Ayikho indlela elula yokuhlola ukuthi kungenzeka yini i-ultrasound ne-cavitation yomkhiqizo wakho nenqubo. Yonke imiphumela etholakalayo nale unit ingafakwa kalula. Lokhu kukuvumela ukuba usebenzise imiphumela yakho ekuveleni kwezokukhiqiza ngezindleko eziphansi zokutshalwa kwezimali nezondlo.
Uma udinga usizo ukuze uthole inqubo yakho esebenzayo, sizobe sisekhona ukukusekela. Sinolwazi olubanzi ku-ultrasound, cavitation nokusetshenziselwa kwamanzi. Ngokusekelwe kulokhu singakukwazisa ngesinqumo sephamethane esifanele kunazo zonke nakuhlelo lokusebenza. Umlando wethu omude wezinqubo esizihlanganisile, kusenza sikwazi ukukunikeza ulwazi olubalulekile nobuchwepheshe bokudlulisela imiphumela yakho kunoma yisiphi isayizi oyifunayo.
Ukuze senze isinyathelo sokuqala ekucwaningeni nasekukhuliseni, sikunikeza leli phakethe eliphelele ku-a intengo ekhethekile.
1 x UIP1000hdT (iprosesa ye-digital ultrasonic)
1 x FC100L1-1S (ukugeleza kweseli)
1 x BS4d22 (i-sonotrode)
1 x BS4d40 (i-sonotrode)
1 x i-RFLA100 (o-ring-flange)
1 x B4-1.8 (booster uphondo)
1 x i-ST2 (ume)
115 Volts, AC, isigaba esisodwa, 16A, 50-60Hz
ukulethwa: FOB Mt. Holly, NJ 08060, e-USA
intengo: I-USD 17,350.00 inetha , 100% phansi ukukhokhelwa nge oda
I-230 Volts, AC, isigaba esisodwa, 8A, 50-60Hz
ukulethwa: i-EXW Teltow, eJalimane
intengo: EUR 12,400.00 inetha, 100% phansi ukukhokhelwa nge oda
Ukubukeka kwentengo nokubukeka kungashintsha ngaphandle kwesaziso. Asikho isikweletu sokushiya izinto ngaphandle. Azikho izinguquko zokuqukethwe. Le ntengo ayikho emibandela yokuqasha. Awekho izinhlelo zokukhokha. Uma udinga ukuhlola ukutholakala kwento sicela u-imeyli noma ucingo ngaphambi kokuhleleka. Le ntengo iyatholakala eYurophu naseNyakatho Melika (USA, Canada), kuphela. Sicela ucele amanani kwezinye izindawo.